‘संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेप्यो’ : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो – कमल खबर
Home/अन्तर्वार्ता/‘संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेप्यो’ : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो
देश संघीय संरचनामा गएसँगै अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । हिजोको स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तहकारुपमा परिचित छ। संघीय संरचनामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारको गति सुस्त छ। केन्द्र सरकारबाट गएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित छन्। तर प्रदेशले यसो हुनुमा केन्द्र नै दोषी रहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
केन्द्र सरकारले हालै नयाँ बजेट ल्याएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै प्रदेश सरकार आफैँ पनि बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । संघीय सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँगको कुराकानी ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
बजेटको कमजोर पक्ष चाहिँ के हो ?
स्थानीय तह र प्रदेशलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको हो भने संघीयताको भविष्य के होला ?
संघीयताको मर्मबिपरित केन्द्रीकृत मानसिकतामा आधारित बजेट परिलक्षित छ। वित्तीय संघीयताको कार्यवन्यनमा बजेट चुकेको छ। विकासको मुख्य मेरुदण्ड तल्लो तहको सरकारलाई बनाउनुको सट्टा आफैँमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न तल्लो तह बलियो बनाउनुपर्ने होइन र ?
तपाईंहरूले बजेट खर्चै गर्न सक्नुभएन, किन बजेट दिनुपर्‍यो त ?
कतिपय कर घटाइएको छ। आगामी वर्ष राजस्व आय ९ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो कसरी सम्भव होला ?
थाहाकर्मी अर्जुन आचार्यसाझामञ्च बाट साभार
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा रु ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख बिनियोजन (कुन स्थानीय तहलाई कति बजेटः पुरा विबरण)